Isandla esiPhezulu kuMgangatho oPhezulu - I-Airbnb
Isandla esiPhezulu kuMgangatho oPhezulu
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguKay And Rob
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uKay And Rob iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ibekwe ngokufanelekileyo imizuzu emi-6 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye nemizuzu kude ne "Hip Strip" edume kakubi, ikhaya laseMargaritaville, iilwandle, iindawo zokutyela ezingenakubalwa, kunye nezinye iindawo zokuzonwabisa.
Iyunithi inezinto ezintle ezibandakanya umoya, i-wi-fi, indawo yokuhlamba impahla, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye nokhuseleko lweeyure ezingama-24. Le ndawo ikwindawo epholileyo ifanelekile kumhambi wohlahlo lwabiwo-mali ofuna eyona Montego Bay ingcono anokunikezela ngexabiso elifikelelekayo.
Icocekile, ikhululekile kwaye ime kakuhle. Ibekwe kufutshane nendawo yokupaka ukuze kube lula ukufikelela kuyo.
4.60 · Izimvo eziyi-65
Misa kwinduli ejongene nembonakalo entle yesixeko kunye nomda wamanzi. Yimizuzu emi-6 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye nomgama wokuhamba kumbindi wesixeko, isithili sokuzonwabisa saseHip Strip kunye neelwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Kay And Rob
Sifumaneka nanini na ngefowuni kwaye umamkeli wethu wasekuhlaleni uNorma (Janet) uya kufumaneka ukuze ancede ngokobuqu xa kuyimfuneko.